Ọkachamara Semalt: Ọnụ Ọgụgụ Akaụntụ Mkpokọta Gbasara Aka na Mmetụta Ya
Akụkọ na-egosi na ndị omempụ mba ọzọ nọ n'azụ ọnụ ọgụgụ ndị e mere na Australia. NaAustralia Bureau of Statistics wee buru ụzọ mechie usoro iji nọgide na-eguzosi ike n'ezi ihe nke data. N'inyochakwu ihe,ụlọ ọrụ ahụ kwuru na a na-ede akwụkwọ ọgụgụ ntinye aka na nsonye DDoS anọ kesara, nke ọ bụla dị iche iche na mgbanwe dịgasị iche iche - morgan computing services.
Nik Chaykovskiy, Onye Ọrụ Ndị Nlekọta Ndị Na-ahụ Maka Ndị Ọrụ Gbasara Ọkachamara ,akọwa ihe mere ihe ndị a ji eme.
Mwakpo ahụ na-anwa ime ka saịtị ghara ịnweta ndị ọrụ site na iju mmiri na yarịọ ka ọ na-ejide. Ihe ntanetị maka ozi na-agafe na nkesa nke kwadoro na-enye onye ọ bụla ohere ilele ibe.Otú ọ dị, ọ nwere ike ịnagide ụfọdụ arịrịọ. Nnukwu ibu nwere ike iduga nkwụsị nke nkesa nkesa, na-eme saịtị ahụnwa oge adịghịzi adị. Nbudata DDoS na-adabere n'ọtụtụ ngwaọrụ gbasaa n'ụwa nile, ya mere aha ahụ "kesara". Ụdị nkea na-akpọ ngwaọrụ ndị ejikọtara ya na "botnets" nke ọ bụla na-ebute malware nke na-enye ndị na-agba ọsọ na-abanye na saịtị site na iji ohere ntanetị.
Ihe kpatara DDoS Jiri
Ndị omekome nwere ike iji mgbochi DDoS maka ọtụtụ ihe kpatara ya. N'ime ha bụ:
Hackstism. Hacktivists na-eji ụdị mmegide a megide mkpesa megide ụfọdụ omume site na iche..
Ọpụpụ. A maara ndị omempụ Cyber ​​iji usoro a iji nweta ego.gbanwee maka ịkwụsị ọgụ na-aga n'ihu.
Mkparịta Ụka ​​ DDoS nwere ike ọ gaghị abụ ọrụ achụmnta ego ziri ezi, mana ọ bụMgbe ụfọdụ, a na-eji arụ ọrụ nke onye na-eme egwuregwu asọmpi ma ọ bụ kwụsị ọrụ
Script Kiddies. Ụfọdụ ndị na-eji Intanet na-eji ihe odide ndị e mere tupu ha abanye na ịntanetị.ihe ndị ọzọ dị ka ndị na-eme egwuregwu.
Gịnị Ka Ndị Ngwá Agha Ga-esi Nweta DDoS Census
Nke mbụ, anyị ga-aghọta na ndị ọgba ọsọ ga-amararịrị na ọ ga-ekwe omumeenweghị nsogbu nke saịtị Census. O nwere ike ịbụ n'ihi ụzụ dị arọ nke ruru. N'ihi ya, saịtị ahụ esiwanyewanyeatumatu maka ndi nlekota ndi ozo di iche iche iji gosi ot'u usoro ochichi nke Australia si abia. O nwekwara ike ịbụ nzaghachi nye ụbaokwu ọha na eze maka nchedo ha na nchedo onwe ha. Andy Hurren nwekwara otu echiche ahụ, kwere na isi ihe ahụ bụenweghị ike ichebe usoro ntanetị dị elu nke mba online. Ihe ndị mere na-akpali ọgụ ahụ adịghị ka ọ bụ ego ma ọbụ data.Ihe ndị ọzọ nwere ike ime bụ ndị na-enweghị mgbakọ ndị si mba ọzọ na-adịghị ekweta na usoro ahụ ma ọ bụ onye chọrọ igosi ha ọrụ hacker.
Ihe Data ahụ Dị Aṅaa?
Otu ọgụ DDoS na-elekwasị anya na mgbalị ya iji mee ka saịtị ahụ kwụsị. Ọ dịghị elekwasị anyadata dị na saịtị ahụ. Otú ọ dị, ụfọdụ ndị na-awakpo ahụ nwere ike iji mmegide DDoS rụọ ọrụ dịka ntụgharị, site na nke ha ga-esi na ya pụọdata njirimara site na netwọk dị ka ikpe nke telecom TalkTalk.
Atụmatụ na-adị n'ihu
ABS kwenyesiri ike na isi ihe kpatara mkpesa Census bụ ọdachi DDoS.Enwere ike inwe ọtụtụ ihe kpatara ya, ma ebe ọ bụ na ABS nwere ihe ọmụma ọzọ ma mara ihe ị ga-achọ mgbe ị chọpụtara isi iyi ahụ, na njedebenke mmebi. MR. Hurren, bụ onye ọkachamara na cyber-security kọwara na mkparịta ụka n'etiti Ụlọ Ọrụ Australia Signals and relevantndi ozo bu ndi ozo. Ọ nwere ike ịdị mfe ịchọta isi iyi nke mbuso agha ahụ, ma mgbagwoju anya nke mbuso agha ahụ nwere ike ime kaaka na-esiri ha ike.